Dib u noqosho oo xagga Ifoorykust
Kabista siismada ah ee dib u noqosho ee Ifoorykust waa kuwan:
Hey’adda U Adeegta Qaxaatiga (VluchtelingenWerk) ee Ifoorykust waxay wada shaqeeyaan ururka Caritas Ifoorykust. Waxay iyaga hagaan dadka dib u soo noqday (ha ahaadeen shaqsiyo ama qooysas) sidii aay nolol cusub u bilaabi lahayeen. Waxay taasi ku soo dhowey kartaa soo noqdayaasha gegada diyaaradaha, in ay ku caawinaan raadinta hooy (ku meel gaar ah) ayna iyaga ku garab galaan sida ay shirkad yar u sameyn lahaayeen ama helista shaqo. Waxaa kaloo ay caawinaad ka bixin karaan helista waxbarasho ama xirfad barasho wacan, xiriirro wax gal ah iyo shax waxayna dadka u gudbin karaan haddii loo baahdo hey’adaha caafimaadka. Hey’adda U Adeegta Qaxaatiga (VluchtelingenWerk) waxa ay ilaa iyo sannad keddib dib u noqoshada xiriir la lahaaneysaa ururka lammaanaha u aha si ay ula socdaan sida xaaladdaada tahay.
Haddii aad adiga garab galka IOM xulatay, waxaa ku caawinaaya shaqaale xafiiska-IOM ee Ifoorykust sidii aad u maareyn lahayd kharashka-dabiiciga ah. Waxa aad khrashkaas u adeegsan kartaa tusaale ahaan kiro, xirfad barasho, tababar, iibka shirkad, iwl.